Muslims in UK should report this racist criminal Naing Win to the authorities | Dr. Abdul Rahman Zafrudin @ Ko Ko Gyi
HomeMuslims in UK should report this racist criminal Naing Win to the authorities
Muslims in UK should report this racist criminal Naing Win to the authorities
Muslims in UK should report this racist criminal to the authorities. Don’t try to give lame excuse as you were drunk at the time. Why you do not want to go back to your lousy motherland and enter the criminal Ma Ba Tha “monkhood” so that you could go to hell?
U Naing Win added2new photos.
ယခင်ကတော့ ဒီလိုအရေးဆို ကျုပ်က ရှေ့ဆုံးကနေ ကန့်ကွက်တာပေါ့။
ခုတော့ လက်ခုတ်တောင် တီးပေးရတော့မလိုပဲ။
ပြည်တွင်းကုလားနဲ့ ပြည်ပကုလားတွေက ဘင်္ဂလီအရေးမှာ အမိမြန်မာနိုင်ငံကို သစ္စာဖောက်ပြီး သူခိုးကို ဓားရိုးကမ်းနေကြပေလို့။
မင်းတို့လို နိုင်ငံတော်သစ္စာဖောက်တွေအတွက် အဲ့ဒီလို အမျိုးသားရေးဆိုသူတွေနဲ့ပဲ တန်တယ်။
ရှင်းလား မရှင်းလျှင် ထပ်ဖတ် ဖတ်ဖြစ်အောင်ဖတ်။ ဖေ့စ်ဘုတ်ခ်ပေါ်မှာ ဆဲလိုက်ကြတာလဲ မိုက်ရိုင်းလိုက်တာ မိုးကိုမွှန်လို့ ဘဂလီအမျိုးတွေ ပီသချက်ကတော့ ပြောတောင်မပြောချင်ဘူး။
ရန်ကုန်၊ဗိုလ်တစ်ထောင်မြို့နယ် ၉ရပ်ကွက် ၄၅လမ်း YMCA ခန်းမမှာ ” ၁၄၉၁ ကြိမ်မြောက် တမန်တော်နေ့အထိမ်းအမှတ်ဓမ္မသဘင်အခမ်းအနား ” ဆိုတဲ့ အခမ်းအနားတစ်ခု
ကျင်းပမယ့်အပေါ် ရန်ကုန်မှာရှိတဲ့အမျိုးသားရေးညွှန့်ပေါင်းအဖွဲ့က ပုဂ္ဂိုလ်တွေလာရောက်ကန့်ကွက်ခဲ့တယ်လို့သိ
သူ ရဟန်းအချို့နဲ့ လူပုဂ္ဂိုလ်အချို့တို့စုပေါင်းထားတဲ့
လာကန့်ကွက်သူအရေအတွက်က လူ၁၀၀ ခန့် ရှိတယ်လို့ သတင်းဖြစ်စဉ် နေရာမှာရှိတဲ့ သတင်းထောက်က
William Saw မင်းလိမ်တဲ့ကောင်ပြောပေါ့ ခိုးဝင်တာဆိုဘယ်ဘာသာဘယ်လူမျိုးမှငါတို့လက်မခံဘူးကွ အခုပြောတာကပြည်တွင်းကမွတ်ဆလင်မ်တွေခေတ်အဆက်ဆက်နိုင်ငံအတွက်ပေးဆပ်ခဲ့ကြတာကိုအသိအမှတ်မပြုရုံမကနိုင်ငံသားအခွင့်အရေးတောင်အပြည့်အဝမရကြလို့ မင်းသိမ်းကြုံးမရမ်းပါနဲ့ မင်းပြောသလိုဆိုမင်းကောဘာထူးလဲ
William Saw နိုင်ငံကြီးတစ်ခုမှာနေပြီးအတွေးအခေါ်ကအောက်တန်းရောက်နေတာအံ့သြမိတယ်
William Saw ခိုးဝင် သမိုင်းလိမ် ဘယ်လူမျိုးဘယ်ဘာသာပင်ဖြစ်စေကာမူကျဆုံးပါစေ မှန်ကန်သူများတိုးတက်ထွန်းကာပါစေ မင်းကျိန်ရဲလား
Aung Michel အမျိုး ဘာသာ သာသနာလို့ ဟစ်ကြွေးပြီး ခေါင်းဆောင်အဆက်ဆက်က အုပ်ချုပ်လာလိုက်ကြတာ …
မြန်မာပြည်ကြီး ဟိုးးးးးး အောက်ဆုံးအဆင့်ကို ရောက်သွားတဲ့အထိပဲ။
ဘယ်နယ်ပယ်မှာပဲ ယှဉ်ယှဉ် မြန်မာအမည်က နောက်ဆုံး အောက်ဆုံးရောက်နေတာတောင် ဒီစကားလုံးကို ပါးစပ်က မချနိုင်ကြသေး။
ငါတို့ အမျိုး မထိနဲ့။ ငါတို့ဘာသာ မထိနဲ့။ ငါတို့သာသနာ မထိကြနဲ့။ မီးပွင့်သွားမယ်။
ရပြီ … ဒီစကားလောက်ပဲ ကြားရရင် ရပြီ။ အစိုးရဖက်က ဘာလုပ်လုပ် လက်ခံကြပြီ။
ဒီစကားလုံးကိုပဲ ကရားရေလွှတ်ပြောပြီး သဲ့ထည့်သွားကြသူတွေ အိတ်ဖောင်း၊ တိုင်းပြည်ကြီးလည်း ပြောင်၊ အမျိုး၊ ဘာသာ၊ သာသနာ ကတော့ ဟိန်းဟိန်းမြည်နေဆဲ။
မြန်မာပြည်မှာ လုပ်စားလို့ အကောင်းဆုံးစကားလုံး “အမျိုး၊ ဘာသာ၊ သာသနာ”။ ဒီစကားကြားရုံနဲ့ လူတိုင်း လက်ခံတယ်။ ဟုတ်တယ်။ အမျိုး၊ ဘာသာ၊ သာသနာကို မစောင့်ရှောက်ရင် ငါတို့ မြန်မာ မပီသတော့ဘူး … တဲ့။ ဒီအသံတွေက … ဘုန်းကြီးတွေကို ပြုံးမော်စေတယ်၊ ပညာတတ်တွေကို ခေါင်းညိတ်စေတယ်၊ ပညာမဲ့တွေ ငပိန်းတွေကို မူးလဲစေတယ်၊
ဒီ အမျိုး၊ ဘာသာ၊ သာသနာ အသံနောက်ကို လိုက်နေရင်း တိုင်းပြည်ကြီးလည်း ဗုန်းဗုန်းလဲခဲ့ပြီ။ နေရာတိုင်းမှာ ခေါင်းမထောင်ကြတော့။
ဘယ်တော့မှ ဒီ “အမျိုး၊ ဘာသာ၊ သာသနာ” အမူးပြေကြမလဲ မသိ။ တချိန်လုံး ဒီအမူး နဲ့ မူးနေကြပြီ။ တိုင်းပြည် ရှေ့ဆက်ဖို့ အမူးပေါင်းစုံ ပြေဖို့ အချိန်လွန်နေပါပြီ။
Kyaw Soe အများရှေ့မှာ သမိုင်းအထောက်ထားနဲ့မရှင်းသ၍ ဘာမှပြောစရားမလို
Ko Phoenix မင်းတို့လဲ သန်းရွှေ၊ နေဝင်းတို့ စစ်ဖိနပ်နဲ့ပဲ တန်တယ်။
Moe Hein Nldအစိုးရမျက်နှာမပျက်ရင်
William Saw မင်းကမြန်မာနိုင်ငံအတွက်ဘယ်လောက်သစ္စာရှိလဲ မင်းဒီလောက်ပြောင်းလွဲသွားတာအံ့သြမိတယ် မင်းကိုလေးစားမိသမျှအလကားဖြစ်သွားပြီ ရခိုင်ကိစ္စမင်းဘယ်လောက်သိလဲ အမှားအမှန်ခွဲခြားဘို့ခက်အောင်ရှုပ်ထွေးနေတာ ဒေါ်စုတောင်ရဲရဲမပြောဝံ့ဘူး အခုကိစ္စကမတရားလို့ပြောနေတာ မြန်မာပြည်ကမွတ်ဆလင်မ်တွေထက်အေးချမ်းစွာနေတတ်တာ သီခံတတ်တာမင်ငြင်းလို့မရပါဘူ
← လူများစုက လူနည်းစုကို အနိုင်ကျင့်ကြတာ ယူနီဖောင်း အမျိုးစုံနဲ့ – ‘ဇ’ မရှိလို့ ယူနီဖောင်းအကာအကွယ်ယူပြီးလူမိုက် လုပ်နေတဲ့ကောင်တွေကို ” မင်းတို့-သတ္တိရှိရင်…ယူနီဖောင်းချွတ်ပြီး လာခဲ့”
Permanent salaried “protesters” employed by Min Aung Hlaing as Swarn Arr Shins and Ma Ba Thas →